‘Mandeha Manavatsava Ny Fahafatesana Izahay,’ Hoy Ny Sioka Avy Amin’ny Bilaogera Yemenita Amin’ny Ady Ao Amin’ny Firenena. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Avrily 2015 5:44 GMT
Ny fanohanan'ny mpiara-dia amin'ny Arabon'ny Helodrano, Ejipta, Jordania, Maraoka, Sodàna ary Arabia Saodita, no nanatontosana hetsika daroka baomba an'habakabaka tamin'ireo mpiadin'ny Houthi izay nifehy an'i Yemen tamin'ny volana Janoary. Notohanan'ny Etazonia ihany koa izany hetsika izany, izay manome fanohanana ara-pitsikilovana sy ara-pitaovana hoan'ny Saodiana mpiara miasa aminy.
Mampiseho ireo foto-drafitrasa rava, simba sy nikorontana noho ny ady ny tatitra farany navoakan'ny Biraon'ny Firenena Mikambana hoan'ny Fandrindrana ny Maha-olombelona.
Nilaza ny mpitondra-tenin'ny Komity Iraisam-pirenen'ny Vokovoko Mena ao Yemen, Marie Claire Feghali fa “tena sarotra” ny toe-draharaha maha-olona manerana ny firenena … [miaraka amin'ny ‘] fahatapahan'ny fifamoivozana an-dranomasina, an'habakabaka sy an-tanety”. Ary namariparitra ny zava-misy ao Aden ho toy ny ” loza (raha lazaina ho kely indrindra)” ihany koa izy. Nilaza koa izy fa: “Eny an-dalana rehetra eny, isaky ny zorony ny ady ao Aden … Maro ireo tsy afa-mandositra.”